'वाम गठबन्धनले कांग्रेसलाई ठूलो अवसर दिएको छ'
अन्तर्वार्ता/विचारआइतवार, कार्तिक १२, २०७४
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापासँग अागामी निर्वाचन र समसामयिक राजनीतिका विषयमा गरिएको कुराकानी ।
राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टिले यो चुनाव कति महत्वपूर्ण छ ?
तीनवटा कुराले निर्वाचन एकदमै महत्वपूर्ण छ । निर्वाचन भएन भने, पहिलो त संविधान नै दुर्घटनामा पर्छ । दोस्रो, राजनीतिक अस्थिरताका कारण समाजमा जुन प्रकारको उकुसमुकुस छ, त्यो झन् बढ्छ । तेस्रो, संक्रमण एक विन्दुमा पुगेर टुङ्गिन्छ भनेका हौं, टुङ्गिनुपर्छ ।
अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कसले जित्छ भन्ने मात्रै चासो हुन्छ । तर, हामीकहाँ त जहिले पनि चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै मुख्य प्रश्न रहन्छ । अब हामी पनि प्रजातन्त्रको अभ्यासमा जान्छौं ।
त्यसैले यो चुनावले राजनीतिप्रति आम मानिसको विश्वासलाई बढाउँछ, संक्रमणकालको अन्त्य गर्छ । जनताको व्यवस्थाप्रतिको विश्वासलाई कायम राख्न, संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढाउन, समाजका हरेक अवयवलाई चुस्तदुरुस्त राख्न, हरेक कोणबाट यो चुनाव मुलुकका लागि ‘लाइफ लाइन’ नै हो ।
जनतामा चुनावप्रति उत्साह कति पाउनुभएको छ ?
सुशासन, जनताको जीवन, दलहरूका क्रियाकलाप आदि सन्दर्भमा अघिल्लो कार्यकाल उति सफल भएन । अझै पनि जनतालाई अबको चार/पाँच वर्षमा ‘मैले के पाउँछु र !’ भन्ने भान परिरहेको हुनसक्छ ।
ठूला–ठूला उपलब्धि त हासिल गर्‍यौं, जस्तो संविधान बनायौं संघीयता कार्यान्वयन गर्‍यौं । यो त मलाई चमत्कार जस्तै लागिरहेको छ । तर, जनताको जीवनस्तरमा केही परिवर्तन ल्याउन सकेनौं । यो हाम्रा लागि विडम्बना भएको छ । शायद जनउल्लासको मापन पनि यसकै कसीमा होला ।
पहिलो चरणको मनोनयन भइसक्दा पनि आमनागरिकमा मात्रै हैन, राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरूमा समेत चुनाव के होला भन्ने प्रश्न कायमै छ । यसको कारण के हो ?
संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदाहुँदै पनि म आफैंलाई चुनाव हुन्छ र ? जस्तो लागेको थियो । आफैं सरकारमा हुँदाहुँदै पनि कताकता स्थानीय चुनाव हुँदैन कि जस्तो लाग्थ्यो । अहिले चुनावको दौडानमा छु, भोट मागिरहेको छु तर, वेलावेला त्यस्तै लाग्छ ।
यसको एउटा मात्रै कारण छैन् । लामो संक्रमणका कारणले हाम्रा थुप्रै निर्णयहरू आफैं गर्न सक्दैनौं कि भन्ने कुरा बलियोसँग गडेर बसेको छ । जे भइरहेको छ, त्यो कुनै षडयन्त्र हो कि भन्ने शंकाले ठाउँ लिइरहेको छ । यो पटक त अदालतमा चुनावसम्बन्धी मुद्दाहरू परिरहेका छन् । यसले पनि बल पुर्‍याएको छ ।
चुनाव सार्ने चलखेल भए जस्तो लाग्दैन ?
मेरो विचारमा छैन । कुनै शक्तिकेन्द्र वा व्यक्तिहरूको केही सामान्य योजना होला तर त्यसले चुनावमा केही असर गरेको छैन र सक्दैन । कांग्रेस र एमालेले चुनाव हुन नदिन वा सार्न चाहेको भए, संसद्‌मा निर्वाचनसम्बन्धी कानून बनिरहेको वेला वा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगभित्रै समस्या सिर्जना गरेर मंसीरमा चुनाव गर्न नसक्ने स्वाभाविक अवस्था सिर्जना गर्न सक्थे । एक–अर्कालाई आरोप त लगाइरहेकै छौं तर, दुवै पार्टीको ध्येय निर्वाचन होस् भन्ने थियो र, छ ।
यसको मतलब निर्वाचन समयमै होस् भनेर प्रमुख दलहरू इमानदारीपूर्वक नै लागिरहेका छन् ?
एकदम छन् । त्यसका लागि गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छन् । तर, मौका पाउनासाथ ‘हामीले निर्वाचन चाहेका छौं, उसले चाहेको छैन’ भन्ने आरोप लगाउन पनि छोडेका छैनौं । यसमा राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनले गर्दा कांग्रेसभित्र चुनावको पक्ष र विपक्षमा विग्रह ल्याएको छ भन्ने चर्चा पनि छ नि !
कांग्रेसमा केही नेताहरूको भनाइ, ७ माघभित्र निर्वाचन गर्र्नैपर्छ भन्ने छैन, संसद् रहँदैन, चैतमा चुनाव गर्दा हुन्छ भन्ने थियो । उहाँहरूले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिलाई त्यो सुझाव दिनुभएको पनि थियो । तर, सभापति ७ माघभित्रै चुनाव गर्नेमा दृढ हुनुहुन्थ्यो । यस्तो कुरालाई आधिकारिक रुपमा पार्टीभित्र प्रवेश गर्नै दिनुभएन ।
गठबन्धन बनेपछि पनि केही नेताहरूले कुरा गर्न खोज्नुभएको जस्तो त लाग्थ्यो तर, पार्टीको ठूलो पंक्ति निर्वाचन सार्ने कुरा सोच्न पनि नहुने पक्षमा थियो र, छ । निर्वाचन सार्दा हुने अनिश्चितताले त कांग्रेसलाई पनि सिध्याउँछ । अर्को, चैतमा पुर्‍याउँदा एमाले–माओवादी एउटै पार्टी बनेर चुनावमा जाने अवस्था आउँछ, झन् बलियो हुन्छन् । कांग्रेसलाई नै घाटा हुने हो ।
मतपत्रको विषय अदालतमा पनि प्रवेश गरेको छ । यस्तो प्राविधिक विषयले चुनावलाई असर गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
पार्न सक्दैन र पार्नुहुँदैन पनि । यसमा अदालत पनि सचेत छ । ‘दुइटा मतपत्र हुनुपर्ने हो’ भनेको कुरा नाजायज हैन । तर, दुइटा मतपत्र नभएकै कारण निर्वाचन सार्न मिल्दैन । अदालतले ‘निर्वाचन रोक’ भनेको पनि छैन । अदालत यतातिर जान्छ जस्तो लाग्दैन ।
कथंकदाचित चुनाव रोकियो भने यसको असर कति ठूलो पर्ला ?
यसले अहिले बनिरहेको वातावरण एकैपटक भत्काउँछ । अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने ठाउँ बढ्छ । नैराश्यताले झन् बढी ठाउँ लिन्छ ।
हामी आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्दैनौं भन्ने सन्देश पनि त जाला नि हैन ?
अवश्य । मानौं, अदालतको फैसलाले गर्दा नै निर्वाचन सर्‍यो भने पनि अदालतकै कारण मात्र निर्वाचन सर्‍यो भनेर जनताले पत्याउँदैन । अदालतको आदेश आउनासाथ एमालेका एक जना सचिवले ‘कांग्रेसले अदालतको प्रयोग गर्‍यो’ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो । त्यो हतारको अभिव्यक्ति हो ।
भोलि एमालेको सरकार हुँदा हामीले पनि अदालतका हरेक निर्णयमा ‘सरकारले प्रभावित गर्‍यो’ भन्यौं भने अदालतले कसरी स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न सक्ला ?
यो चुनावको सम्मुखमै आएर वाम तालमेल भयो । यसले कांग्रेसको भोटलाई कति असर पार्ला ?
हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र आजको राजनीतिक यथार्थको कारणले एउटा दलको स्पष्ट बहुमत आउने अवस्था छैन । त्यसैले माओवादी केन्द्रसँग, सम्भव भएसम्म अरु दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने भन्ने हाम्रो छलफल चलिरहेको थियो ।
अकस्मात् सरकारमा बसिरहेको दल अर्कोसँग तालमेल गर्दा र पार्टी नै एकीकरण गर्छु भन्दा केही प्रभावित हुने अस्वाभाविक हैन । यो चुनौतीपूर्ण छ नै । पूरै चुनावी रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैले, हामी पनि धेरै दलसँग तालमेल गरेर जान चाहन्छौं । तर वाम तालमेलले हामीलाई अवसर दिएको छ । हिजो एमालेले पाएको मतमा केही प्रतिशत ‘प्रजातान्त्रिक पार्टी हो’ भनेर गएको छ । एमालेलाई जनताले माओवादीभन्दा फरक सोच्थे, धेरै अजेन्डामा कांग्रेससँग समान देख्थे । अब ती मतदाता हाम्रो हुनसक्छन् ।
२०४८ को निर्वाचनदेखि नै कांग्रेसले आफूलाई ‘लोकतान्त्रिक पार्टी’ भनेर भोट मागिरहेको छ । अब पनि यसले काम गर्ला ?
प्रजातन्त्रको आधार कांग्रेसले जहिले पनि लियो, लिइरहेको छ । तर, यसले २०५१ को मध्यावधि र २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा काम गरेन । चाहनामा मात्रै पनि नहुने रै’छ तर, यसले यो पटक अवश्य काम गर्छ जस्तो लाग्छ । खासगरी वाम तालमेलको कारणले गर्दा ।
दुई वाम पार्टीको तालमेल र सम्भाव्य एकताले क्रमशः सेन्ट्रल लेफ्टमा आइरहेको एमालेलाई अलि बढी लेफ्टतिर धकेल्ला कि लेफ्टबाट माओवादीलाई सेन्ट्रल लेफ्टतिर ल्याएर कांग्रेसलाई अझै राइटतिर पुर्‍याउला ?
एमाले सेन्ट्रल लेफ्टबाट अलि लेफ्टतिर जान्छ कि जस्तो लाग्छ । किनभने ‘एउटै कम्युनिष्ट पार्टी किन चाहियो ?’ भनेर सैद्धान्तिक रुपमा पुष्टि गर्न पनि बढी कम्युनिष्ट सिद्धान्ततर्फ झुकाव हुनुपर्छ । माओवादीले गरेको युद्ध एकतहसम्म ठीक थियो भनेर अब एमालेले स्वीकार गर्दै जानुपर्छ । एमाले सेन्ट्रल लेफ्टमा बसेर ‘विश्व कम्युनिष्टलाई उदाहरण दिने पार्टी बनाउने’ कुरा सम्भव छैन ।
त्यसो भए यो गठबन्धनले कांग्रेसलाई नै बढी फाइदा पुर्‍यायो त ?
कहिल्यै पनि आँखै नलगाएका एमालेका मतदातालाई आफूतिर तान्ने अवसर पाएका छौं । हाम्रो पुरानो मत त यथावत् छँदैछ, त्यो त घट्दैन । अर्कोतिर, हामीले हाम्रो राजनीतिक सान्दर्भिकता भन्न नसक्दा, कुराहरू प्रष्ट रुपमा राख्न नसक्दा केही समस्यामा परेका हौं । अब हाम्रो राजनीतिक सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने अभूतपूर्व अवसर आएको छ ।
संक्रमणको समयमा मुलुकमा भू–राजनीतिक चलखेल देखापर्‍यो । वाम गठबन्धनले यसलाई स्थान दियो वा हटाउन भूमिका खेल्यो ?
भू–राजनीतिक चलखेलको यथार्थताभन्दा हाम्रो सोच बढी हावी छ । वाम गठबन्धन पनि घरभित्रको कारणले मात्रै हैन भनेर ठूलो राजनीतिक पंक्तिले विश्वास गर्छ ।
अर्को, जुन लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्ने क्रममा छ, यसलाई पनि एउटा तप्काले कसैले बनाइदिएको हो भनेर भ्रम छरिरहेको छ । एक–अर्का विरुद्ध भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ । जसले हामीलाई त झन् कमजोर बनायो, भू–राजनीतिक चलखेललाई झन् बढी स्पेस दिन्छ । मुख्य कुरा चलखेललाई कम गर्नको लागि एक–अर्काको अस्तित्व र भूमिका स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
कार्यकर्तादेखि जनतासम्म अर्काको अस्तित्वलाई बाहिरी कारणले बनेको भनेर प्रशिक्षित गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । हाम्रो अस्तित्व आफैं बनेको हो तर, हामीबीच मतभेद चाहिं छ है भनेर अगाडि बढ्ने हो भने भू–राजनीतिक चलखेल स्वतः कम हुन्छ ।
चुनावी तालमेलमा राप्रपा, राजपा, फोरमलगायतका दललाई लिएर जाँदा यसले कांग्रेसलाई झनै दक्षिणपन्थतिर धकेल्ने सम्भावना छैन र ?
कांग्रेसको आकार, सिद्धान्त आदि कारणले क्षेत्रीय राजनीतिको सीमिततामा बसेका दलहरूले खासै फरक पार्दैनन् । कांग्रेस राइटमा ढल्कने हैन कि तालमेलमा रहेका दलहरू कांग्रेसको लाइनमा आउने हुन् ।
तर कांग्रेस जस्तो छ, जस्तो देखिन्छ, जस्तो सुनिन्छ, त्यति मात्रै भएर पुग्दैन । अब फरक हुनैपर्छ । व्यक्तिगत रुपमा म अत्यन्तै खुशी छु, किनकि वामगठबन्धनले कांग्रेसलाई ठूलो अवसर दिएको छ । तर, म के कुरामा चिन्तित र सतर्क छु भने हिजो सेन्ट्रल लेफ्टमा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरू पुनः झनै लेफ्टतिर जाने हुन् कि !
प्रस्तुतिः किरण नेपाल र सन्त गाहा मगर
आइतवार, पौष १, २०७५ सरकारको अवतरण
आइतवार, पौष १, २०७५ ‘कान्ति बाइरोड’
शनिवार, मंसिर २९, २०७५ निर्मम समीक्षा गर
शनिवार, मंसिर २९, २०७५ विद्युत् आपूर्ति नहुँदा चार दिनदेखि ब्यांक बन्द